7 Toerana glamping tsara indrindra any Eropa | Save A Train
Home > Travel Europe > 7 Toerana glamping tsara indrindra any Eropa
Fotoana famakiana: 5 minitra(Last Nohavaozina: 11/04/2021)
Mifoha amin'ny vorona mihira, miaraka amin'ny mahatalanjona ny fomba fijeriny avy eo am-baravaranao, ao amin'ny yurt na trano hazo mamirifiry. Ny glamping amin'ny toerana mahafinaritra indrindra any Eropa dia fironana lehibe ankehitriny. Ny manaraka 7 toerana manintona tsara indrindra any Eropa dia manolotra traikefa nahafinaritra momba ny fialamboly ara-tontolo iainana ara-tontolo iainana. Miaraka amin'ny herinaratra maintso, fanodinana, ary tombana hotely misy kintana 5, ny glamping no fomba maharitra maharitra mankany Eropa amin'ny fialan-tsasatra.
1. Toerana glamping tsara indrindra any Eropa: Fiarovana voajanahary Veluwe any Netherlands
Sakafo hariva momba ny labozia any amin'ny ala mahafinaritra any Veluwe, mandeha eo afovoan'ny hazo miaraka amin'ny tara-masoandro voalohany. Ity dia ampahany amin'ny traikefa nahafinaritra nanonofy tamin'ny voalohany valan-javaboary any Holandy. Afaka misafidy ny hijery ianao 2 tahiry voajanahary: Veluwezoom National Park with the most beautiful viewpoint the Posbank, na Hoge Veluwe, paradisa ho an'ny mpankafy fitsangantsanganana.
Ho an'ny fotoana tsara indrindra any amin'ireny tany ireny, afaka misafidy ny hijanona ao amin'ireo yurts mahafinaritra ianao, tranolay safari na trano hazo, glamping options options in Veluwe. Ohatra, ny Schenkenshul tahiry voajanahary, akaikin'i Hoenderloo, no toerana mety indrindra filasiam-pianakaviana, tsy milavo lefona amin'ny trano sy trano fampiononana.
2. Echologia Glamping Spot any Frantsa
Eo amoron'ny renirano lehibe indrindra ao Mayenne, hahita trano fandraisam-bahiny mahafinaritra ianao. Ao amin'ny lohasaha La Loire dia azonao atao ny misafidy ny hijanona ao anaty tranokely mitsingevana, kabine ala, na lay lafo vidy.
Sakafo maraina eo amin'ny teras, lakana an-drano, na mankafy divay vera iray vera dia vitsy amin'ireo tombontsoa azonao rehefa glamping eto. Lohasaha La Loire no faritra divay any Frantsa, toy izany, ny divay tsara indrindra any an-toerana dia dingana vitsivitsy monja amin'ny tranolay na tranonao lafo vidy. Echologia dia toerana glamping tsara ho an'ny Solo mpandeha any Frantsa, sy ny vakansy fianakaviana.
3. Toerana glamping tsara indrindra any Eropa: Glamping romantika ao amin'ny Rhone-Alpes France
Matory eo ambanin'ny kintana, manafana eo am-patana rehefa milomano any ivelany, ny French Alpes dia toerana mampangitakitaka mahagaga. Ny faritr'i Rhone any amin'ny Alpes frantsay dia iray amin'ireo toerana glamping tsara indrindra any Eropa. Noho izany, afaka manana ny fialan-tsasatry ny volanao amin'ny ririnina ao anaty trano maitso maitso na lay ianao.
Na izany aza, raha aleonao vakansy lohataona, avy eo dia ho tianao tanteraka ny Alpes mamelana. Manana ny kafe maraina, voahodidin'ny natiora, dia iray amin'ireo traikefa tsara indrindra amin'ny fiainana. Ankoatry ny, mandritra ny fialantsasatra mavitrika kokoa, afaka mitsangantsangana amin'ireo tendrombohitra mahafinaritra ianao na manandrana mamaky rafo ao amin'ny Ony Ardeche.
Satria eo anelanelan'ny Italia sy France izy io, ho hitanao fa tena mora ny mandeha any amin'ny lamasinina.
4. Glamping any Bohemia afovoany, Prague
Bohemia dia faritry ny paositra any amin'ny Repoblika Tseky. Ny mampiavaka azy dia mitoetra amin'ny toerana misy ny faritra hanova akanjo amin'ny fiovan'ny vanim-potoana. Amin'ny fahavaratra dia ho hitanao fa maitso sy mando izy, and in the fall in beautiful golden and orange tones. On the banks of a lake, tampon-tendrombohitra, na ala mitokana, Ny oasis an'i Bohemia dia adiny iray monja avy any Prague, amin'izay ianao afaka mankafy ny tsara indrindra amin'ny tontolo rehetra, ao am-pon'ny natiora.
Betsaka ny fonenana manjelanjelatra manodidina ny farihy Lipno na akaikin'ny tendrombohitra Jizera. Noho izany, afaka mankafy ny farihy miavaka sy ny ala ianao, avy amin'ny terrasinao, na kovetabe mafana fandroana manokana.
5. Toerana glamping tsara indrindra any Eropa: Podcast glamping mihaja eo amin'ny Alpes Soisa
Fiakarana ski tsara indrindra, fomba fijery tsara indrindra, eo amin'ny tokonam-baravarankelin'ny kibonao. The Toerana mahagaga i Alpes Soisa amin'ny fotoana rehetra, ary izao dia afaka mijanona eo afovoany ianao. Raha ny Swiss Alps dia toeram-pialan-tsasatra malaza ho an'ny mpizaha tany manerantany, vitsy dia vitsy no mahalala an'io ho toy ny toerana manjelanjelatra.
Ny trano fandraisam-bahiny any Alpes dia feno fitaovana sy natao ho an'ny fiadanam-po, ary fijanonana mahatalanjona. Afaka mijanona eo afovoan'ireo satroka feno lanezy ianao, fa ao anatin'ny kôdinao mihaja, ho mafana sy milay izy io. Hifoha amin'ny toerana mahafinaritra ianao, mandeha mitsangatsangana mivantana avy eo am-pandriana mahafinaritra anao, aorian'ny sakafo maraina matsiro.
Ny fahitana, rivotra madio, ary ny làlana marobe no mahatonga ny Alpes Soisa ho iray amin'ireo 7 toerana glamping tsara indrindra any Eropa.
6. Trano glamping mihaja ao Puglia
Any akaikin'ny ranomasina Adriatika sy Ioniana no misy azy, Puglia dia toerana nofinofy ho an'ny fialan-tsasatra glamping tsara indrindra any Eropa. Ny feon'ny onja, rano manga madio, tsio-drivotra hariva, sy sakafo italianina, mety hihatsara kokoa noho io. Na dia, glamping ao anaty lay lafo vidy, mankafy ny tombony amin'ny hotely, tsy manimba ny teti-bolanao – Ny glamping no fomba farany fialan-tsasatra amin'izao fotoana izao.
Puglia dia toerana mahafinaritra ho an'ny glamping, mivoaka amin'ny lainy mankany amoron-dranomasina na eo an-tampon'ny havoana manatrika ny ranomasina, nofinofin'iza na iza. Hahita safidy fitobiana glamping betsaka ao amin'ny vohitra Apulia ianao.
Ity oasis amoron-dranomasina ity dia azo aleha amin'ny lamasinina avy any Roma sy Bari.
Roma mankany Puglia miaraka amina lamasinina
Naples mankany Puglia miaraka amina lamasinina
Bari mankany Puglia miaraka amina lamasinina
Florence mankany Puglia miaraka amina lamasinina
7. Ny tantaram-pitiavana sy ny glamping any Tuscany
Ny tantaram-pitiavana no teny mamaritra ny glamping tsara indrindra any Tuscany. Tsy lavitra an'i Sienna, sy ny Ranomasina Mediterane, ao amin'ny havoana maitso volory any Tuscany, miandry lay romantika sy maitso fialan-tsasatra ho an'ny 2.
In Tuscany, afaka mandeha mitady truffles ianao, take a cooking class and prepare pasta for dinner. -tsy izany, azonao atao ny mihodina manodidina ny tanàna italiana tsara tarehy avy amin'ny Lazy Olive Glamping toerana. Ary, glamping ao Tuscany mahatonga anao hahatsapa ho anisan'ny natiora, apetraka ao ambadiky ny hazo oliva.
eto amin'ny Save A Train, Ho faly izahay manampy anao handamina ny fialan-tsasatrao ho an'ny 7 toerana glamping tsara indrindra any Eropa amin'ny lamasinina.
Te hampiditra ny lahatsoratray bilaogy “Toerana glamping 7 tsara indrindra any Eropa” amin'ny tranokalanao ve ianao? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome antsika-bola miaraka amin'ny rohy ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-glamping-places-europe%2F%3Flang%3DmgNyawang- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
BestGlampinginEurope filasiana GalmpingPlacesInEurope glamping GlampingDestinationsEurope GlampingPlaces LuxuryCampingEurope trano rantsan-kazo Winterholiday